Waxaan idinku soo dhawaynaynaa adiga iyo qoyskaaga barnaamijka Oklahoma WIC. Ma u baahan tahay caawimaad wax iibsi? Fadlan na soo wac haddii aad wax su'aalo ah qabtid adigoo garaacaya: 405-549-3291 24/7. Haddii aad u baahan tahay gargaar naas-nuujin, fadlan ka wac Khadka Naas-nuujinta Oklahoma ee 1-877-271-CAANO (6455). Waxaad wici kartaa lambarkan 24 saacadood maalintii si aad u hesho taageero naasnuujin ee loogu talagalay hooyooyinka kalkaalinta ah, qoysaskooda, shurakadooda, waalidiinta mustaqbalka, iyo xirfadleyda caafimaad. Dhammaan wicitaannadii waxaa soo celiyey La-Taliyaha La-tashiga ee La-ansaxiyay ee Caalamiga ah (IBCLC). Sidoo kale waad geli kartaa Kheyraadka bacda dhalashada ee Virtual halkan.
Ma ku cusub tahay WIC? Fadlan daawo Oklahoma Talooyinka Iibka ee WIC video hoose!
Fikradaha Dukaan-garaynta ee Oklahoma WIC Video
Fikradaha Dukaan-garaynta ee WIC
Talooyinka Iibka ee WIC
Q: Miyay tahay inaan helo dhammaan cuntooyinkayga WIC (cuntooyinka iyo caanobooraha)?
A: Looma baahna inaad mar uun soo wada furato waxtarradaada WIC (cuntooyinka iyo caanobooraha). Waad dooran kartaa inaad iibsato wax yar ama midkoodna faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka & caanobooraha) laguu qoray.
A: La xiriir rugtaada WIC si aad ugala hadasho ikhtiyaaradaaga wixii isbeddel ah ee ku dhaca dheefaha WIC. Dukaanka wax beddel ah lagama sameyn karo.
Q: Miyaan quudin karaa cunugayga ama manfacyada WIC (cuntooyinka & caano-karin) xubnaha kale ee qoyskeyga?
A: Faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka & qaaciddada) waxaa loogu talagalay oo keliya qofka sida gaarka ah loogu qoray dheefaha WIC (cuntooyinka & caanaha). Haddii kuwa gurigaaga ku nool ee qaata dheefaha WIC (cuntooyinka & caanaha) aysan cunin cunno gaar ah oo ay bixiso WIC, ama ha ka helin dukaanka ama ha weydiinin shaqaalaha rugta caafimaadka ee WIC inay ka saaraan dheefahaaga WIC (cuntooyinka iyo caanaha) .
A: La xiriir rugtaada WIC si aad ugala hadasho waxyaabaha kuu banaan.
Q: Waxtarkeyga WIC (cuntooyinka iyo caanobooraha) miyey u wareegi doonaan bisha xigta haddii aan la isticmaalin?
A: Maya. Waxtarro kasta oo WIC ah (cuntooyin & caanobooro) aan la iibsan bishaas ayaa la iibsan doonaa ma u gudub bisha xigta.
Alaabta iskaan kujira barnaamijka WICShopper si loo hubiyo inay yihiin kuwo u qalma Oklahoma WIC. Xusuusnow inaad xaqiijiso inaad ku haysato faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka & caanaha) kaarkaaga eWIC ka hor intaadan isku dayin wax iibsi!
Ka eeg Oklahoma WIC Liiska Cunnada la Ansixiyay (AFL) ee WICShopper (ama noocaaga daabacan) si aad u aragto faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka & caanaha) aad iibsan karto.
Oggol - Sheygan waxaa loo oggol yahay Oklahoma WIC! Hal shay oo ah in la ogaado waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin qayb kama aha faa'iidooyinkaaga WIC (cuntooyinka iyo caanaha), marka ma iibsan kartid WIC. Tusaale ahaan, canugga kayar laba sano wuxuu ku heli doonaa caano dhan faa iidooyinka WIC. Haddii ilmahaagu yahay laba jir ama ka weyn, caanaha oo dhan kama mid noqon doonaan faa'iidooyinkaaga WIC, mana awoodi doontid inaad ku iibsato caano dhan diiwaanka. Ilaa faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka iyo caanaha) ay ku xiran yihiin barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn faa'iidooyinka WIC ee qoyskaaga (cuntooyinka & caanaha).
Ma aha wax WIC ah - Tan macnaheedu waa Oklahoma WIC ma ansixin sheygan. Haddii aad u maleyneyso inaad awood u leedahay inaad ku iibsato cunnadan faa'iidooyinka WIC (cuntooyinka & caanaha), noo soo sheeg adigoo isticmaalayaTani ma iibsan karto!"Button ee app this.
Liiska Cuntada WIC ee Ingiriisiga
Dhammaan macluumaadka kujira qaybta Caafimaadka iyo websaydhka Adeegga Waayeel waxaa loogu talagalay ujeedooyin waxbarasho oo keliya loomana isticmaali doono ogaanshaha ama daweynta. Macluumaadka waxaa loo bixiyay si loo sii fahmo nafaqada WIC iyo arrimaha la xiriira. Isticmaalayaashu waa inaysan waligood iska indhatirin talooyinka caafimaadka ama dib u dhac ku sameeyaan raadinta sababtoo ah wax ay ku arkeen bartaan. Xirfadlayaasha nafaqada, dhakhaatiirta, iyo xirfadleyda kale ee daryeelka caafimaadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay la tashadaan ilo kale oo ay hubiyaan macluumaadka ku jira bartan. Tixraacyada hay'ad kasta oo aan dawli ahayn, wax soo saar, adeeg, ama isha macluumaad ee laga yaabo inay ku jirto degelkan looma tixgelin doono oggolaansho, ha ahaato mid toos ah ama si toos ah, waaxda Caafimaadka ee Oklahoma iyo Adeegyada Waayeelka. Intaa waxaa sii dheer, Waaxdu mas'uul kama noqon karto mas'uuliyadda macluumaadka ku jira bogag kale oo websaydhkeeda lala xiriiri karo. Haddii wax xun oo macluumaad ah laga helo goobahan, waxaan uga mahadcelineynaa ogeysiinta degdegga ah email.